Tababare Arsena Wenger Muxuu Ka Yiri Hadii Ay Naceyn Isaga Taageerayaasha Kooxda Arsenal %
Tababaraha kooxda kubada cagta Arsenal, ee wadanka Ingiriiska, kaasoo uwaramay warbaahinta ka hor ciyaarta ay la balansan yihiin Axada dhigooda Watford ayaa sheegay in Jamaahiirta kooxdiisa aysan isaga nicin.
Sheekadaan ayaa xoogeysatay kadib markii Gunners-ka, ay la kulantay guul darooyin xiriir ah, kuwaasoo keenay xitaa inuu shaki weyn uu galo mustaqbaka macalinkaan mudada dheer hogaaminayay Arsenal.
Sikastaba, Arsenal ayaa wada guulaha waxay kusoo noqotay kadib markii ay guul weyn ay gaareen habeenkii Khamiista markii ay kusoo dharbaaxeen dhigooda AC Milan, ciyaar kusoo dhamaatay 2-0, kana tirsaneed Europa League.
“Haa, laakiin hadii aan si daacad ah uqaato fogaanka udhaxeysa midaas – Aniga ma ahi midka ay naceen, waxay naceen macalinka, kaasoo aanan qaab ciyaareedka iska bedalayn,” ayuu yiri Wenger.
“Waxaan qaatay taasi mid ka duwan, laakiin waxaanan hada ku farax-saneen kulaamdii aan guul dareysanay, waxaana doonayaa inaan badino, guusha waxay ku timaadaa xitaa midka aad hami leedahay.
“Marka aanan sameyn dabcan waan dhibtooneynaa, sida ay ku dhacdo qof walba,” ayuu Wenger hadalkiisa kusii daray.
“Arsenal waa 30 Milyan oo qofood, mana ahan hal qofood oo dhibtoonaya, waxaana dooneysaa inaan 30 Milyan oo qofood aan ka dhigto kuwa farax-san, waxaana qaadi karnaa midaas,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay.
Arsenal vs WatfordPremier LeagueWenger